အဆိုပါဥပဒေ: ကလဲ့စားချေ porn အန္တရာယ်နှင့်တရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ် | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဥပဒေ လက်စားချေ porn
sexting နှင့်ဆက်စပ်သောအသစ်မြန်ဆန်-ပျံ့နှံ့ဖြစ်ရပ်ဆန်း "လက်စားချေ porn" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပစ်မှတ်အများစုအမျိုးသမီးအရှက်နှင့်အထိခိုက်နာကျင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက်သဘောတူညီချက်မပါဘဲဝတ်လစ်စလစ်နဲ့ topless ဓါတ်ပုံများ၏အွန်လိုင်းဖြန့်ဖြူးသည်။ ပြည်သူ့မကြာခဏခက်ခဲအင်တာနက်ကနေဖယ်ရှားဓာတ်ပုံများကိုရှိသည်ဖို့တွေ့ပြီ။ ရုပ်တုဆင်းတုများကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပကြသည်ဘယ်မှာအတော်များများက်ဘ်ဆိုက်များဗြိတိန်ပြင်ပမှာအခြေစိုက်နေကြပြီး, content တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်တောင်းဆိုမှုများမကြာခဏလျစ်လျူရှုနေကြပါတယ်။
ဧပြီလ 2017 ခုနှစ်တွင်စကော့တလန်အတွက်လက်စားချေ porn အပေါ်သစ်ကိုဥပဒေအောက်မှာအင်အားစုသို့ကြွတော်မူ ကြမ်းတမ်းအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နစ်နာမှုအက်ဥပဒေ 2016။ ထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းသို့မဟုတ်ရငျးနှီးသညျ့ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကိုထုတ်ဖော်ရန်ခြိမ်းခြောက်များအတွက်အများဆုံးပြစ်ဒဏ်5နှစ်ပေါင်း '' ထောင်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ဦးကိုဝတ်လစ်စလစ်သို့မဟုတ်မှသာအတွင်းခံထဲမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ရပ်အတွက်စေ့စပ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးခြင်းရှိရာပုဂ္ဂလိကအတွက်သိမ်းယူပုံရိပ်တွေပါဝင်သည်။
လက်စားချေ porn ကိုလည်းအင်္ဂလန်နှင့်ဝေလနယ်များတွင်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပြစ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဣသရေလအမျိုးကိုတရားမဝင်စေကာလိင်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်ကဆက်ဆံဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဦးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပင်နယ်တီ, ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင်, ထောင်ထဲမှာ5နှစ်ပေါင်းအထိဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးကိုလည်းတရားမဝင်စေမယ့်ဥပဒေကြမ်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်ကာလီဖိုးနီးယားအတူတူပင်အဆုံးမှဦးဆောင်ယူနေကြသည်။ သူမငြူစူသောစိတ်တစ်ခုမထိုက်မတန်အတွက်သူမ၏ရည်းစားရဲ့ဖြစ်သူရည်းစား၏ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများဖြန့်ဝေပြီးနောက်ကနေဒါမှာတော့တစ်ဦး 17 နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးကလေးညစ်ညမ်း၏ပိုင်သောပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့သည်။
အဆိုပါပါဝင်သည်ကိုကူညီအရင်းအမြစ်များ လက်စားချေ Porn တိုင်ကြားမှု နှင့် စကော့တလန်အမျိုးသမီးများနေ့ကူညီပေးရေး.
<< The Sexting ကဘယ်သူလဲ? ရာဇဝတ်မှုအတွက်ထ။ >>